I-georeference yangaphakathi -Geofumadas
Matshi, 2015 Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, egeomates My
Xa sifunda beengcamango ezahlukeneyo exhasa unxibelelwano lubandakanya mapping zombini njenge inzululwazi ukumela izenzakalo okuyo ezifana nokuzoba ukunika olu lwazi kubuhle kuyimfuneko, siyaqonda ukuba ixesha esiphila kuquka izenzo ezininzi kubomi bemihla ngemihla apho sisebenzisa khona i-georeference njengezenzo zansuku zonke.
Ukususela mzuzu siya uvula ifowuni ephathwayo, ulwazi sithumela okanye ukufumana inxulunyaniswa georeferencing: Imozulu, iindaba zakutshanje, zokuncokola, nangokujonga imaphu, vuliwe GPS okanye kophawu imifanekiso. Ngokucacileyo le akazange afike ebusuku, kusoloko phezu umbono kufuneka siphile lixesha ngaphambili, nangona siyayibona umthamo phantse obungasikelwanga mda obuntu ukuya fyabo ekubeni, akunakwenzeka ukuba sibone ukuba kwenzeka ntoni 25 minyaka ezayo Ngendlela efanayo mhlawumbi akukho namnye wakugqala oku 25 kwiminyaka eyadlulayo, ingakumbi kwixesha nobuchwepheshe bolwazi lwezenzululwazi yekhompyutha andile ngokucacileyo massification of ezintsha ukutyiwa ngemihla.
Nangona i-criterion georeference isenzo sendalo somntu, ukuqwalasela ukuchongwa kwayo kwisixhobo okanye kwimephu eprintiweyo, ixesha elide kwakuyimisebenzi ekhethekileyo kunye nokufikelela kuphela kwiqela elikhethekileyo labantu. Ngoko ke, jonga inkalo okunexabiso georeferencing kubalulekile ukuba ukuzimisela kwakho ethile ukuba iprojekthi oko kwenzeka kwezinye iinkalo zezifundo kule minyaka izayo. Masibone ke iimpembelelo zalo mbandela.
Ngaba i-georeferencing yaba yintoni?
Isizathu silula kumgaqo: kuba i-geolocation yinxalenye yobomi bemihla ngemihla. Yonke imihla kufuneka sihambe kwindawo enamacala amathathu, apho siqhuba iibhloko ezingamashumi amabini ukuya ngasekunene, ezintandathu ukuya ngasekhohlo, sehla amanqanaba amabini ukuya kupaka imoto kwaye siye kumanqanaba amane ukuze sisebenze eofisini. Oku singayenza yonke imihla kwaye xa kufuneka siyicacise kwiphepha okanye siyigraze kwintengiso, kuxa sisazi kakhulu. Kodwa leyo i-geolocation ixesha elide yayiyindawo kunye nomdla umntu ngamnye, ke oko kwakusenziwa njengesiqhelo semihla ngemihla.
Kanakubo (1) ngephepha lwakhe uchaza uphuhliso cartography wanamhla, ukuba nasekusungulweni thiyori cartography iye yanxulunyaniswa izinto ezibalulekileyo ezikhoyo ngamaxesha athile; Ngokomzekelo, ubukhosi obunqobileyo, amaqela eemfazwe kwiimfazwe, okanye amazwe oqoqosho lwamazwe ngamazwe. Ngaloo mathuba wadala imfuneko ukubona georeference kunye ukufikelela ngaphaya kwinqanaba lengingqi, njengoko kwenza amazwe asebumelwaneni, kwilizwekazi kwaye njengoko nencum yangoku: iingcinga jikelele.
Umzuzu esiphila ngawo ngoku, wenza umdla wokugcina ihlabathi elixhunyiwe, lifuna ukusetyenziswa kwe-georeferencing kwiindlela zokuhamba. Kanye njengokuba kuye wasondeza inkalo okunexabiso: kwiivenkile zifuna ukubonisa apho, abathengi kufuneka izakhiwo zabo ukufikelela, abavelisi ubuchwepheshe bathembisa ukuphuhlisa izicelo, i Academy inikeza imfundo engenye kule ndawo yaye olu khuphiswano kuzisa olutsha kubasebenzisi. Ewe, umsebenzisi wokugqibela akayiqondi le nto, kwaye yiloo nto esiyibiza ngokuba yi-Intrinsic, kuba iphila kwansuku zonke.
Iinzuzo ze-geolocation yangaphakathi
Kukho izizathu ezininzi zokuba sikholelwa ukuba oku kunenzuzo, nangona kamva siya kuthetha ngeengozi. Ukususela kwimbono yabantu abagcina ubutyebi bethu bezesayensi kunye nobuchwepheshe beenkcukacha zendawo, inzuzo enkulu kunayo imfuno eqhubekayo yeenkonzo zethu. Ingaba sihlakulela izicelo, ukuqeqesha, ukuthengisa iimveliso okanye iinkonzo, ukuba i-georeferencing iyimfuneko yethu.
Kodwa ngaphaya kwezinto ezithandayo, inzuzo ebalulekileyo kukufumaneka kwezicelo zomntu, usuku ngalunye lunemisebenzi engakumbi ngokusekelwe kwimizi-geolocation. Makhe sibone ukuba kulula kangakanani ukuhamba ngoku usebenzisa umsizi we-GPS okhoyo kwisithuthi, kwaye ucinge ngamathuba okungazange abe nalo kwaye ukuba uhambo lube nezizathu eziphuthumayo. Sinokubona inzuzo yomsebenzisi onokubeka iimveliso zawo kwi-intanethi, engafumanekanga kumthengi ngaphandle kwelizwe, ngaphandle kokudibanisa ngqo.
Uqeqesho oluhambelana ne-geo-yobunjineli bubungqina bokuba luncedo lwe-geolocation. Amaqela afanelekileyo ekubanjweni kwedatha kwintsimi, imihla ngemihla ixabiso lamanani. Kodwa nayo yonke imihla kunzima ukwazi umda phakathi kwintsimi kunye nemisebenzi yekhabhinethi, ngenxa yokuba i-georeferencing ichanekile kokubanjwa, ukulandelelaniswa nokusebenza kwezibonelelo. Imigangatho efana ne-BIM (2) ijolise ukuvelisa i-geolocation ukuya kumlinganiselo ongaphezu kwezinto ezicingelwayo, ezifana nokusebenza, ixesha kunye neendleko.
Kukho inzuzo eninzi ekuveliseni ulwazi ngolunye usuku olusebenzayo kwaye luyimpumelelo. ngokusebenzisana Voluntary ngosuku umdla namhlanje kuphuhliso lweenkqubo ezifana Open Street Maps, linekhathalogu omhlaba, kunye mapping ethe yaveliswa kubulela umsebenzisi uluntu onamandla eyaziwa ngokuba ngaphandle. Oku bekungeke kwenzeke ukuba i-geolocation ayifuni ukungena ngaphakathi, kuba ukuvelisa le ngcaciso, akuyimfuneko umzamo ongaphaya kokuvula umsebenzi wesabelo kwisixhobo esisefowuni kunye nokwamkela ukulayishwa kwedatha.
Ngoko ke xa sandisa ubungakanani benzuzo kwi-geolocation, qi niseka ukuba uluhlu luya kubanzi kakhulu. Ijoliswe ngakumbi kwezoqoqosho, ukuphathwa kwexesha elingcono, ukubambisana, ukhuseleko kunye nethuba lokuvuselela inzuzo yoluntu.
Iingozi zokungena kwezinto zangaphakathi
Akuyiyo yonke into iya kuba yindawo enokungaqiniseki njengokwenziwa kwedemokhrasi yolwazi. Kukho umngcipheko ochaphazelekayo, apho kuphela umgwebi oqhelekileyo ngumntu ofanayo.
Phakathi kwezi sinokuzikhankanya, ukulahlekelwa yinkcazo. Inyaniso yokuba sixhomekeke kwisixhobo esixhunywe kwiimpawu ze-GPS, kubandakanywa ukuhanjiswa kolwazi lwemihlaba yecalac once that's a private. Kwaye ngelixa kunokuba luncedo kwabanye ukuba bazi ukuba kuphi abantwana babo, kuya kuba yingozi kubaphuli-mthetho ukuba baqonde olo lwazi. Ubumfihlo ekupheleni yimeko enxulumene nayo ingozi.
Omnye umngcipheko kwindlela kaCrampton (3) kwincwadi yakhe yesayensi enxulumene neemephu: uthi kuthathe lukhulu kwiimephu ukuba nomgangatho kunye nenkxaso yezenzululwazi esinayo ngoku. Kodwa inyani yokuba ukubonisana kunye nokwenziwa kweemephu ngabasebenzisi abangabalulekanga iba yinto ebonakalayo, kuzisa umngcipheko wokuphulukana nomgangatho okanye iikhrayitheriya ezisemgangathweni. Isikhundla siyaziwa ukuba ngokungxama kokusebenza kophuhliso lwenzululwazi, kokukhona kuncipha umzamo wobuchopho kwaye ke umngcipheko wokubuyela kubukrelekrele.
Ekugqibeleni, i-georeference yangaphakathi kukubandakanywa kwe-geolocation kwimizila eyahlukeneyo yoluntu, isisayensi, ubugcisa okanye imihla ngemihla. Le georeferential has evolved to the degree that we do automatically. Iintlobo zininzi kunokuba zingozi, ngoko kuya kufuneka ukuba uqaphele iimeko, zombini ukufumana amathuba nokucebisa izicwangciso.
(1) iTositomo Kanakubo, Uphuhliso lweCoptographic Contemporary Theorical
(2) Ukwakhiwa koLwazi lweZakhiwo
(3) njani Ukupaka iMephu kuSayensi
(4) Ithathiwe ngemvume yombhali: Utitshala wathi ayisosincoko asifunayo eklasini yakhe, ukuba ulindele into engaphantsi kohlalutyo, emgceni ngakumbi, engacaciswanga, ngamafutshane, ngokungachazwanga kangako. Isizathu esaneleyo sokuphinda usenze kwakhona apha.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Icandelo lokuThelekisa iMveliso
Post Next Ukucwangciswa kwamatyala kuchazweOkulandelayo »